ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇူလိုင် 31, 2020 .3mins read
အခုတစ်လော အိမ်ထောင်ဖက်တွေ၊ အတူနေ ချစ်သူစုံတွေ မကြာခဏ ရင်ဖွင့်တိုင်ပင်ကြလို့ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးလိုက်ရတာပါ။ သူတို့ရဲ့ အဓိက ပြဿနာက ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်သက်တမ်း ကြာလာလို့ ချစ်ရသူက လိင်ဆက်ဆံရမှာကို စိတ်မပါတော့သလို၊ ပျင်းနေသလိုကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာပါ။
တကယ်တော့ လူတော်တော်များများမှာ လိင်စိတ်ကို လုံးဝခံစားလို့ မရနိုင်တဲ့အချိန်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ မွေးကတည်းက လိင်စိတ်ကို ခံစားလို့မရတဲ့ Asexual တွေကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် နေ့စဉ် အလုပ်ခွင်၊ မိသားစုရေးရာ၊ လူမှုရေးရာ အဖြာဖြာကနေ စိတ်ဖိစီးမှု ပေါင်းစုံ ဝင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ လူတွေရဲ့ လိင်စိတ်ကို လုံးဝ ငြိမ်ကျသွားစေလောက်တဲ့အထိ ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ အရာပါ။
အိမ်ထောင်သက် ကြာလာတဲ့ စုံတွဲတွေမှာ မိသားစု စားဝတ်နေရေး၊ စရိတ်တွေ၊ သားသမီးအတွက် နောင်ရေး ပူပန်ရတာတွေ၊ ခင်ပွန်းသည်က ရုံးမှာ ပူလောင်ရတယ်၊ ဇနီးသည်က အိမ်မှာ ပူလောင်ရတယ်၊ နှစ်ယောက်သား ဆုံပြန်တော့လည်း အပူတွေ စုမိသလိုဖြစ်ပြီး မအေးချမ်းတော့ လိင်မှုကိစ္စဆိုတာ ငြိမ်းသွားသလို ဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေအားလုံးက အခိုက်အတန့်ပါပဲ။
အိမ်ထောင်သက်တမ်း ကြာလာလို့ လိင်ဆက်ဆံရတာ ရိုးအီသွားဖို့ လိုလား။
တကယ်တော့ မလိုပါဘူးဗျ။ အပေါ်မှာ ပြောထားတဲ့ ပြဿနာတွေက လူတိုင်း ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာဆိုပေမယ့် အမြဲတမ်း လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် ပျောက်သွားရလောက်တဲ့အထိ သက်ရောက်မှုတော့ မရှိနိုင်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်၊ ချစ်သူ သက်တမ်းကြာလာတဲ့အခါ လိင်မှုကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လာရင် ကိုယ့်အဖော်က ဘာကြိုက်တတ်လဲ၊ ဘာမကြိုက်တတ်ဘူးလဲ၊ ဘယ်လို အနေအထားမျိုးက သူ့အတွက် အဆင်ပြေမလဲဆိုတာကို ထပ်ပြီး ညှိနှိုင်းနေစရာမလိုဘဲ သိနေတဲ့အတွက် ရိုးသွားစရာ၊ အခက်တွေ့စရာလည်း အကြောင်းမရှိသလို ပိုပြီးတောင် အသစ်အဆန်းလေးတွေ ဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတောင် ကောင်းနေနိုင်ပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံရမှာကို စိတ်မပါတော့တဲ့ စုံတွဲတွေအနေနဲ့ ဘာလုပ်သင့်လဲ။
၁။ အရင်ဆုံး သိထားဖို့ လိုအပ်တာက ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်၊ ချစ်သူမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိနေနိုင်လားဆိုတာပါ။ လူတွေက စိတ်ဖိစီးလာရင် လိင်ဆက်ဆံဖို့ကို စိတ်မပါတော့တဲ့အတွက် ဒီကိစ္စကို အရင်ဆုံး ဖြေရှင်းဖို့ လိုပါတယ်။ ဘာတွေခံစားနေရလဲဆိုတာ သိမှ သူတို့ ခံစားနေရတဲ့၊ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေအတွက် ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လို အားပေးလို့ ရမလဲ၊ နှစ်သိမ့်ပေးလို့ ရမလဲ၊ ဝေဒနာတွေကို ဝေမျှပေးလို့ ရမလဲဆိုတာကို ကိုယ်က စဉ်းစားလို့ ရမှာပါ။
၂။ ကိုယ့်ဘက်က လိုအပ်တာ၊ လစ်ဟာခဲ့တာများ ရှိသလား ပြန်တွေးကြည့်ပါ။ တစ်ခါတလေ လူတွေက ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်နေတာကို ဖွင့်ဟမပြောဘဲ မျိုသိပ်ထားတတ်ပါတယ်။ မျိုသိပ်တယ်ဆိုတာ မေ့ပစ်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အနာကို သဲနဲ့ ဖုံးထားလိုက်တာပါ။ နောက်ပြဿနာ တစ်ခု ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ဖုံးထားတဲ့ အရာတွေကို ဆထပ်တိုးပြီး ခံစားရာကနေ စိတ်ဒဏ်ရာလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အိမ်ထောင်ဖက်တွေမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ တစ်ခါတလေ အလုပ်မအားလို့ ကိုယ်ချစ်ရသူကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ပစ်ထားတာ၊ မေးထူးခေါ်ပြောလောက်ပဲ လုပ်ပြီး အရင်လို ကြင်ကြင်နာနာ စကားတွေ မပြောတော့တာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နေ့တာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို အသိအမှတ် မပြုခံရတာ (ခင်ပွန်းအတွက်သာမက ဇနီးအတွက်ပါ သက်ဆိုင်ပါသည်) စတဲ့အချက်တွေကို အစပိုင်းမှာ သည်းခံလာနိုင်ရင်တောင် ကြာလာရင် ဒီအချက်တွေက ကိုယ့်ရဲ့ လိင်မှုဘဝကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
၃။ အခုပြောပြမယ့် အချက်တွေကတော့ အတူနေစုံတွဲတွေနဲ့ ပိုပြီး သက်ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူတစ်ယောက်ကို စချစ်ကြိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လက်ထပ်ခြင်း မပြုခင် အတူနေပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရေရှည်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံလို့ ဖြစ်မဖြစ် လေ့လာညှိနှိုင်းရပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ စုံတွဲသက်တမ်း ကြာလာလို့ အချစ်တွေ ကျန်နေသေးတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ အချိန်အကြာကြီး တွဲထားခဲ့လို့ မပြတ်ချင်တော့ဘဲ လက်ကျန် သံယောဇဉ်တွေနဲ့ ဆက်နေကြတာမျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့ဘဝမှာကို အဲဒီလို စုံတွဲတွေ မရေမတွက်နိုင်အောင် များတာကို တွေ့ရပါတယ်။
၄။ တချို့စုံတွဲတွေကျတော့လည်း အတူနေရတာ ကြာလာတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ချစ်ခြင်းတွေ ပေါ့သွားပြီး ပုံမှန်အတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုပုံစံတွေလို ဖြစ်လာတဲ့အတွက် လိင်ဆက်ဆံဖို့ကို သိပ်ပြီးတော့ အာရုံစိုက်တာမျိုး မရှိတော့ပါဘူး။ ပြောရမယ်ဆိုရင် လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ် ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင် ဒီလူနဲ့ မဟုတ်ဘဲ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ပြောင်းပြီး ဆက်ဆံချင်စိတ် ဖြစ်လာတာမျိုးပါ။
လိင်ဆက်ဆံရမှာ ပျင်းရိလာတဲ့ ချစ်ရသူကို ကိုယ့်ဘက်က ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်မလဲ။
၁။ လိင်ဆက်ဆံဖို့အတွက် အတင်းအကျပ်တိုက်တွန်းနေတာထက် အနုနည်း သုံးပြီး ပြန်ချဉ်းကပ်ပါ။ ပြောချင်တာကတော့ စစချင်း ချစ်ကြိုက်ကာစက ကိုယ့်ကို ပြန်ကြိုက်ဖို့ အတင်းလိုက်ရောခဲ့သလို ပုံစံမျိုးပေါ့။
၂။ လက်ဆောင် ဝယ်ပေးတာ၊ စကားလေးတွေ ပြောတာ၊ အတူလျှောက်လည်တာ၊ ခရီးအတူသွားတာ အစရှိသဖြင့် ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက် နှစ်ဦးတည်းသာ အတူလုပ်လို့ရမယ့် အရာတွေ များများ လုပ်ပေးပါ။
၃။ ကိုယ့်အပေါ် အမြဲကောင်းပေးတဲ့ ဒီလိုချစ်ရသူကို ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက် အမြဲ ချီးကျူးစကား ဆိုပေးပါ။ မေတ္တာထားပါ။ တန်ဖိုးထားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ မေတ္တာကို တစ်ဖက်လူသိအောင်လို့လည်း အပြောနဲ့ရော အလုပ်နဲ့ပါ သက်သေပြပါ။
၄။ ဘယ်လောက်ပဲ အလုပ်များနေပါစေ၊ ကိုယ်ချစ်ရသူအတွက် အချိန်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
၅။ ညဘက်တွေမှာ ဘာမှမပြောမဆိုနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ အရင်အိပ်ချလိုက်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။
၆။ ကိုယ့်ချစ်ရသူအပေါ် အပြစ်တင်တာ၊ အပြစ်မြင်တာ၊ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖိနှိမ်ပြီး ပြောဆိုတာ၊ အားနည်းချက်ကို လိုက်ထောက်တာမျိုးတွေက အိမ်ထောင်၊ စုံတွဲသက်တမ်းကို မြန်မြန်တိုစေနိုင်ပါတယ်။
သေးသေးလေးဆိုပြီး ဂရုမစိုက်ဘဲ ပစ်ထားတာမျိုးတော့ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ “အမှိုက်စ ပြဿာဒ် မီးလောင်” ဆိုသလိုပါပဲ၊ ကိုယ် လျစ်လျူရှု၊ မေ့လျော့ထားခဲ့တဲ့ အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေက တစ်ချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ ချစ်ရသူကိုပါ သွားပြီး ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကို အမြဲတမ်း သတိရပေးပါ။ ချစ်ရသူကို တန်ဖိုးထားပါ။
https://www.verywellmind.com/keep-sex-life-healthy-in-marriage-2300942 (July 30, 2020)
အရက်ကို သောက်တာ မကောင်းဘူး ကျန်းမာရေးထိခိုက်တယ်လို့ ဘယ်လောက်ပြောပြော ကြိုက်နှစ်သက်သူပမာဏကတော့ လျော့ကျမသွားပါဘူး။ သောက်သုံးနေကြဆဲပါ။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အခြားအာဟာရဆိုင်ရာနည်းလမ်းကောင်းများ မေ 30, 2021 .2mins read
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ လူကြီးတွေကို အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံး မနေအောင်၊ အာဟာရဓာတ်တွေ လုံလောက်ပြည့်ဝနေအောင် ဖြည့်ဆည်းနေနိုင်ဖို့ လိုအပ်တာပေါ့။
ကျန်းမာပျော်ရွှင်စွာ အသက်ကြီးခြင်း, သက်ကြီးရွယ်အို အာဟာရ မေ 21, 2021 .2mins read
ပင်ပန်းလာရင် အိပ်သင့်ရဲ့လား အိပ်လိုက်ရင် ဘာတွေ အကျိုးရှိနိုင်မလဲဆိုတာ ပြောပြချင်ပါတယ်။ လုပ်နေကျ အလုပ်တွေကို လုပ်ဖို့တောင် ခက်ခဲလာပြီဆိုရင် သေချာတာကတော့ ...
အခြေခံကျန်းမာရေး, အခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများ မတ် 1, 2021 .2mins read
အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေကို မျှဝေခံစားလိုစိတ် နဲ့ ကျော်ဖြတ်ပါ
မျှဝေခံစားလိုစိတ် ဟာ လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အမူအကျင့်တစ်ခုပါ။ တစ်ဖက်သားကို နားလည် သဘောပေါက် လက်ခံပေးတာဟာ အမူအကျင့်ကောင်းလို့ ဆိုရမယ်မဟုတ်လား
စိတ်ကျန်းမာရေး, စိတ်ဖိစီးမှုဖြေလျှော့ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 23, 2021 .2mins read
ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးရင် ရာသီထိမ် သွားတတ်သလား။
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 20, 2021 .2mins read